शिबगञ्ज बजारमा मास्क अनिबार्य लगाउनु पर्ने – Hamrosarokar
शिबगञ्ज बजारमा मास्क अनिबार्य लगाउनु पर्ने
शिबगञ्जमा आमा समुह, उद्यमी व्यवसायी, प्रहरी र जनप्रतिनिधिद्धारा निःशुल्क मास्क बितरण
By Hamrosarokar	 On २५ असार २०७७, बिहीबार १७:११
शिबगञ्ज, २५ असार–आफ्नो काम बिशेषले तपाई झापाको शिबगञ्ज बजार आउदै हुनुहुन्छ ? या, शिबगञ्ज बजारहुदै अरु कतै जादै हुनुहुन्छ ? यदि शिबगञ्ज बजारमा तपाई प्रवेश गर्नुभयो वा बस्नुभयो भने अनिबार्य मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ । तपाईसँग मास्क तर लगाउनुभएकौ छैन भने लगाईहाल्नुहोस नत्र पसलबाट खरिद गरेर अनिबार्य मास्क लगाउनु पर्ने प्रावधान छ । मास्कको प्रयोग नभएको अवस्थामा सम्बन्धीत व्याक्तिलाई स्थानीयवासी र प्रहरीले पक्राउ गर्ने समेत भएको छ ।
झापाको शिबसताक्षी नगरपालिकाको वडा नं ६ मा पर्दछः शिबगञ्ज बजार । साविकः शिबगञ्ज गाविस वडा नं १ यस बजार दक्षिणी ग्रामिण क्षेत्रकै ठूलो बजार हो । यहि बजारमा स्थानीय सामाजिक संघसंस्था र स्थानीय प्रशासनले मास्कको प्रयोग अनिबार्य बनाएको छ । यो कोही कसैको लागि नभएर आफ्नो लागि हो, उद्योग वाणिज्य संघ शिबसताक्षीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका शिबगञ्जका व्यवसायी भोलानाथ मैनालीले बताए । संचेत रहौ, सवाधानी अपनाउ भनेर यो अभियान सुरु गरिएको हो, मैनालीले भने ।
बुधबार र बिहिबार शिबगञ्जमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बुधबार, स्थानीय आमा समुह, उद्योग बाणिज्य संघ, इलाका प्रहरी कार्यालय र वडा कार्यालय शिबसताक्षी–६ ले संयुक्त रुपमा ७ थान सर्जिकल मास्क बितरण गरेका छन् ।
सो कार्यक्रममा आामा समुहबाट भगवती कोइराला, गोमा रिजाल, मिना राई, आम्बिका थापा लगायतका अन्य सदस्यहरुको सहभागिता थियो । त्यस्तै, इलाका प्रहरी कार्यालय शिबगञ्जका प्रहरी नायव निरिक्षक सकिल चन्द्र चौधरी, उद्योग बाणिज्य संघको तर्फबाट अध्यक्ष भोला मैनाली लगायतका उद्यमी व्यवसायीहरुको उपस्थिति थियो । यता, वडा कायालयको तर्फबाट अध्यक्ष मनोज खुलाल कार्की, वडा सदस्यहरु लक्ष्मी प्रसाद गुरागाई, बद्री खनाल, नरमाया परिवार र उषा केसीको सहभागिता थियो ।
स्थानीय युवा समाजसेवी चन्द्रमणी पौडेलले सौजन्य गर्नुभएको २ सय थान मास्क र आमा समुहले ५ थान मास्क सहित शिबगञ्जमा जनचेतना मुलक मास्क बितरण गरिएको उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष मैनालीले जानकारी दिए । मैनालीका अनुसार पछिल्लो समय मुलुकभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट संक्रमित हुनेको संख्या ह्वातै बृद्धि भएको छ ।
यसबीचमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट अनिबार्य मास्क लगाउन कडाई गरेको छ । सरकारले लकडाउनलाई यथावत कायम राख्दै सर्वसाधरण नागरिकको दैनिक जनजीवन सम्बन्धी गातिविधिहरुसँगै खकुलो बनाईरहेको छ, मैनालीले भने ।
मैनालीका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न र बचाउन स्वयम् हामी नागरिकको जिम्मेवारी नै हो । यहि, जिम्मेवारी अनसार अत्यावश्यक कामकाज बाहेक घरबाट बाहिर नजाने वा जादा पनि मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने छ । भौतिक दुरी कायम राखेर बस्नु पर्ने लगायतका प्रावधानहरु पुरा गर्नु नै पर्छ ।
बालबालिकाले मास्क लगाउनु जरुरी छ ?
शिबसताक्षी-६ का एक जनामा कोरोना पोजेटिभ, आजैदेखी…
शिबसताक्षी-६ वडा कार्यालय शिबगञ्जले बितरण गर्यो ‘लुगा सिलाउने मेसिन’